I-WOODSTOCK I-50 ISOMBULULA IMBAMBANO YEZOMTHETHO KUNYE NEZEZIMALI ZASEJAPAN - IINDABA
I-Woodstock i-50 isombulula imbambano yezomthetho kunye nezezimali zaseJapan
Abaququzeleli beWoodstock 50 -ngokungaphumeleliyo kwikhonsathi yeminyaka engama-50 bebhiyozela umnyhadala we-1969 wenyani- basombulule ukungavisisani kwabo kwezomthetho noDentsu, inkampani yezentengiso yaseJapan enesivumelwano sokuxhasa umsitho, Ibhilibhodi iingxelo. IWoodstock 50 yarhoxiswa ngokusesikweni ngoJulayi 2019, kwiinyanga ezintathu emva kokuba uDentsu ekhuphe kumnyhadala. Kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo, iphaneli yolamlo yagweba ngokufihlakeleyo ukuba uDentsu wophule ikhontrakthi yakhe neWoodstock 50 yokubonelela nge-49 yezigidi zeedola kwinkxaso mali yomnyhadala ngeAmplifi, ingalo yayo yotyalo-mali. Ngoku, u-Dentsu uxele ukuba uza kuhlawula onke amabango angekahlawulwa ngesixa esingachazwanga esigubungela umonakalo, kodwa engenzi nzuzo ingenakufunyanwa kulo mnyhadala.
Indawo yokuhlala iphelisa isaga yedrama yomthetho ejikeleze umnyhadala ukusukela oko yabhengezwa, eyabona ukuba umsitho uphulukene neendawo, abavelisi, amaphepha-mvume, ukuthengiswa kwamatikiti, kunye nokwenza imisebenzi ephambili ngaphambi kokurhoxiswa ngokusemthethweni.
uhlawule amatyala okusila
Abaququzeleli bakaWoodstock-bekhokelwa nguMichael Lang-baqala ukulamla kunye no-Dentsu malunga nembambano ngoMeyi ka-2020, bafaka isimangalo kwinyanga kamva, betyhola inkampani ngokubaleka nezigidi zeedola kwaye behlasela umnyhadala kumaphephandaba bezama ukubulala festival, entitit them ukuba izigidi imbuyekezo kwaye isohlwayo umonakalo kungagutyungelwanga ngamaqela amabini arbitration wamamela.
Phuma Kutheni iWoodstock 50 Yarhoxiswa , umda wexesha leziganeko ezikhokelele ekurhoxisweni komnyhadala womculo wesikhumbuzo seminyaka engama-50.
bubomi mac miller
hlala kwikhava elula
uAndy kunye nomakhulu wakhe
izinto ezinqabileyo zenzeka g eazy
Nge-albhamu entsha ye-angelo
iingoma zokuphulukana nomama wakho
ikliniki ihamba nawe